Semalt: 8 Black Hat SEO Maitiro Anogona Kuparadza Bhizimisi Rako
Nguva dzose paunenge uine SEO kambani pane imwe purojekiti iwe unofanirwa kunge uri kutarisa maitiro avo ehutano zvikurukuru ane chokuita nemhando dzemafu. Huru tsvuku SEO inongoshanda chete inounza nezvekutsika kwakaderera kuSeO campaign yako munguva refu.
Igor Gamanenko, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji Semalt , anotsanangura munyaya ino 8 maitiro evanhu vemavara madzimai avo vatengi vanofanira kugara nguva dzose kubva:
1. Chisungo Chakanaka
Inosanganisira kushandisa shanduro kuti iwane mhando dzakasiyana-siyana dzepakutanga. Izvi zvinogoneka kuburikidza nekushandura mazwi nemazwi avo ekufananidza mukati menyaya yacho. Izvo software inovimbisa toni yezvinyorwa zvingaratidzika sezvakanaka pakutanga kutarisa - paper editor online. Zvisinei, nyaya idzi dzakawanda zvikuru uye dzisina kukosha. Vanowanzoendesa kune zvikwereti zvakakura pa injini dzinotsvaga . Nyaya yekufuratira ichaita kuti webhusaiti yako ibvumirwe zvakanaka kuti isataure nezvisingabvumirwi kutsvaga injini.
2. Kudzingwa Zvakaderera Mazano Akawanikwa
Kuongorora webhusaiti kunonyanya kuongororwa hutano huripo hwewebsite yako uye huchiwedzerawo kushaya simba kunogona kukonzera kuderedza injini yekutsvaga. Nzvimbo yepaIndaneti ichagara iine kusawirirana kunyanya pashure pokugadzirisa zvakare. Kurasika kukosha kwehutano hwewebhuku hwekutsvaga kwekutsvaga muhupfumi huzhinji munguva yakareba sezvo zvishoma zvayo zvisingakwanisi kuongororwa pasina chekuongorora.
3. Zvinyorwa Zvinyorwa
Kuiswa kwenyaya kunofanira kuitika nguva dzose munzvimbo inodzorwa. Izvo 'zviri nani zviri nani' nheyo inofanira kubudiswa kunze kwehwindo kuti urege kudzikisa-pari spam directory zvinyorwa zvinokuvadza kukuvadza web rankings .
4. IGoogle Haingatori Mentality
Dzimwe nguva SEO makambani anoderedza simba rekutsvaga kutsvaga injini dzakadai seGoogle. The tech giant ine vane injini yakawanda uye zvirongwa zvokufananidza mhando dzose dzemaoko emhando dzemauto SEO tactics, uye vatengesi vemadhora ebhadharo vanobhadhara kana vaoneka inodhura. Imwe webhusaiti inogona kukanganiswa kana kuongororwa pakarepo.
5. Izvo Zvose Nezvokutanga Kutarisa
Vatengesi veSeO vanofungidzirwa zvikuru nezvakaitwa. Kunyange zvazvo zvikwangwani izvi zvakakosha SEO chikamu, mugumo wekupedzisira inofanira kuramba uchienderera mberi nekushandura kwehutachiona mukutengesa. SEO inodyara, uye inofanira kuunza kudzokera kune bhizinesi, saka, vatengesi vanofanira kuisa mazano ekukosha kwemashoko.
6. Chikamu chakatendwa
Makambani mazhinji akawira pasi peizvi. Pane chinangwa chekutora SEO makambani emabasa uye kubhadhara kana zvakagadziriswa zvigadziriswa. Kunyange zvakadaro, paunogona kuwira pasi kune-pasi-value keywords iyo isingounisi misika inotarisirwa kune webhusaiti yako. Makambani akadaro anotsvaga webhusaiti yako nekutsvaga mazita.
7. Kutenga Zvinyorwa Zvisina Kukwana
Hazvidikanwi kutenga zviduku uye zvichida pasi-kukosha nyaya paIndaneti apo iwe unogona kunyorera zviri nani zvinyorwa iwe pachako. Yeuka zvakagadziriswa ndeye mambo, uye iwe unoda kuvaka bhenekeri yako neyakarurama uye yehuwandu hwehutano. Nyora zviripo iwe pachako kana kuti upedze unyanzvi uyo anogona kubudisa zvakagadzirwa nehuwandu.
8. Doorway Mapeji
Mapeji emigwagwa anobvumira mawebhusayithi kuti agadzirise peji rimwe nerimwe rine mutsara unotsanangurwa. Iyi mikova inotungamira vashandisi ku webmasiti yewebsite huru uye ine simba rinogumbura kune vashandisi vewebhu. Kunyanya zvakadaro, ivo vane zvinyorwa zvakaderera, uye Google inowana mapeji emasuo ekunyengera pane zvishoma. Kushandisa zvakanyanya nzira iyi kunotungamirira kuderedza nzvimbo uye kunyange kutongwa.